Tag: silks | Martech Zone
Silk: Gbanwee data na mpempe akwụkwọ ka ọ bụrụ ihe e bipụtara
Sunday, July 19, 2015 Sunday, July 19, 2015 Douglas Karr
You nwetụla mpempe akwụkwọ nwere mpempe data dị egwu ma ịchọrọ iji anya nke uche hụ ya - mana ịnwale na ịhazi sistemụ arụnyere na Excel siri ike ma na-eri oge? Gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye data, jikwaa ya, bulite ya na ọbụnadị ịkekọrịta ngosipụta ndị ahụ? You nwere ike iji Silk. Silk bụ usoro mbipụta data. Silks nwere data na otu isiokwu. Onye ọ bụla nwere ike ịchọgharị Silk ịchọpụta